1310nm DFB Butterfly Fiber Laser Diode ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Box Optronics
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > Fiber Coupled Lasers > DFB လိပ်ပြာလေဆာရောင်ခြည် > 1310nm DFB လိပ်ပြာအမျှင် Laser Diode ကိုဆက်သွယ်ပေးသည်
1310nm DFB Butterfly Fiber Coupons Laser Diode သည်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်လှိုင်းအလျားရှည်အရင်းအမြစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး PM fiber သို့မဟုတ် SM fiber pigtail ပါ ၀ င်သည့် 14 pin pin butterfly အထုပ်ထဲတွင်ရရှိနိုင်သည်။ ဒီလေဆာ၏ကြိမ်နှုန်းနှင့်တုန့်ပြန်မှုက၎င်းကို CATV စနစ်များ၊ ဂျီအက်စ်အမ် / CDMA ပြန်လုပ်စက်နှင့် optical အာရုံခံကိရိယာများအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်စေသည်။
1310nm DFB လိပ်ပြာအမျှင် ၁. အကျဉ်းချုပ်လေဆာရောင်ခြည်
1310nm DFB Butterfly Fiber ၏ ၂. နိဒါန်း Laser Diode
1310nm DFB Butterfly Fiber ၏လေဆာရောင်ခြည် Diode ၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
မြင့်မားသော output ကိုပါဝါ 10 ~ 100mW;
လှိုင်းအလျားသည်းခံစိတ်: +/- 2nm သို့မဟုတ်အခြား;
built-in မော်နီတာ photodiode, အပူ - လျှပ်စစ်အေးနှင့် thermistor;
FC / APC သို့မဟုတ် FC / PC Fiber Optic Connector
4.1010mm DFB Butterfly Fiber ၏လေဆာရောင်ခြည် Diode ကိုအသုံးပြုခြင်း
ရှည်လျားသောလက်လှမ်းမီ Analog ဆက်သွယ်ရေးစနစ်များ,
လှိုင်းအလျားအလယ်ဗဟို အိုင်စီ TL = 15ï½ž35â "ƒ CW 1308 1310 1312 nm
၆။ အထုပ်ပုံနှင့် PIN-OUT အဓိပ္ပါယ် (ယူနစ် - မီလီမီတာ) ၁၃၁၀nm DFB Butterfly Fiber Coupons Laser Diode
Laser Diode 1310nm DFB Butterfly Fiber Coupled Laser Diode ၏ပို့ဆောင်ခြင်း၊ သင်္ဘောတင်ခြင်းနှင့်အမှုဆောင်ခြင်း
hot Tags:: 1310nm DFB Butterfly Fiber Coupons Laser Diode, ထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ၊ လက်ကားရောင်းဝယ်ခြင်း၊ စက်ရုံ၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်း၊